नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : डा. युवराज खतिवडा राजदुत भएर आए पछि पहिलो कार्यक्रम : ड्यालस र ह्युस्टनमा आउँदो महिना घुम्ती शिविर हुने
डा. युवराज खतिवडा राजदुत भएर आए पछि पहिलो कार्यक्रम : ड्यालस र ह्युस्टनमा आउँदो महिना घुम्ती शिविर हुने
डा. युवराज खतिवडा राजदुत भएर आए पछि पहिलो पटक नेपाली दुतावास वासिंगटन डिसीको आयोजनामा ड्यालस र ह्युस्टनमा आउँदो महिना घुम्ती शिविर हुने भएको छ । दुतावासद्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार ड्यालसमा मे १४ र १५ तथा ह्युस्टनमा १६ र १७ तारिक घुम्ती शिविर हुनेछ । नेपाली दुतावास डिसीबाट प्रदान हुँदै आएको
मुख्यमुख्य सेवाहरु शिविरमा प्रदान गरिनेछ । पासपोर्ट नविकरण, नयाँ आवेदन, मंजुरीनामा, एनआरएनए कार्ड, वारेसनामा, भिसा, ट्राभल डकुमेन्ट लगायतका सेवाहरु शिविरमा प्रदान गरिने जनाइएको छ । ड्यालसमा अर्भिंगस्थित पशुपतिनाथ तथा बुद्ध मन्दिरमा दुई दिनसम्म शिविर चल्नेछ । सेवा आवश्यक पर्ने नेपाली तथा विदेशी नागरिकहरुले शिविरमा सम्पर्क राख्न समेत दुतावासले अनुरोध गरेको छ । ड्यालसमा राजदुत डा. युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा आर्थिक कुटनीति संबन्धि कार्यक्रम समेत हुने जानकारी प्राप्त भएको छ ।